कुलमान, नेपाली जनता र बिद्युत प्राधिकरण [लेख] – Khabar Times: Nepal's Online Newspaper
कुलमान, नेपाली जनता र बिद्युत प्राधिकरण [लेख]
नेपाली समाज र जनताका लागि केही गर्न खोज्ने मानिस यहाँ भ्रष्टचारी र अनियमितताको सिकार पनि बन्न सक्ने कुरा नेपाल बिद्युत प्रधिकरणको प्रमुख कुलमान घिसिङ को घट्नालाई लिन सकिन्छ । तीन करोड नेपालीलाई अध्यारोबाट उज्यालोमा लैजानको लागि हरदम रात दिन प्रयासरत उनी पनि यहि सिकारमा परेका छन् । सबै राम्रा मान्छे भ्रष्टाचारी नहोला भन्न सकिन्न । तर भ्रष्टचार भएको कुराको जानकारी र सत्य तथ्य बुभmने निकायहरु पनि छन् यहाँ । बिभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकासित भएको लेखको कमेन्ट मात्र हैन एउटा बाटोमा हिड्ने साधरण मानिसबाट पनि जब मैले उनको र उनले गरेका कामको बारेमा सुनेको छु । त्यो उनको कदर जनताबाट भएको छ । मलाई तथा सबैलाई थाहा छ र एउटा उखान पनि छ आलुको बोरामा सबै आलु राम्रा हुदैन कोही आलु कुहेको पनि हुन्छ त्यही कुहेको आलुले अरुलाई पनि कुहाउन थाल्दछ । मतलब यो समाजमा सबै राम्रा मात्र छैन । यहाँ अनगिन्ती सोच र कुबिचार भएका मान्छे नभएका होइनन् । केहि गर्न खोज्नेको खुट्टा तान्ने र आफ्नो स्वार्थ लुटने मानिस पनि नभएका होईनन् । तिनै मानिसको भिडमा आज कुलमान पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दछ ।
म कुनै राजनिती पाटोको मानिस हैन मैले निस्पक्ष रुपमा उभिएर भन्नु पर्दा देश र जनताका लागि केही गर्न खोज्नेले यहाँ धेरै कुरा ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि धाराको पाईप बिच्छाएर त्यसमा पानी नआउनु पनि त्यो अगुवा कर्ताको दोस यो समाजले दिन्छ । पानी नआउनु उसको दोस होर? उसले त आफु र त्यो समाजलाई पानि खुवान खाजेको हो । यदि पानी आईदिएको भए त्यो समाज हामिले गर्दा आयो भन्थे । यो समाजको मात्र के दोष दोष त यहाँ समाज र देशका लागि केही गर्न खोज्नेहरुपनि दाषि हुन्छन् । अखिर उसलाई पनि के खाँचो अरुले पानि खादा उसले पनि अन्यबाट ल्याएर जारकै भए पनि पानि पिएको भएनि त हुथ्यो नि । सन्दर्भ यहाँ कुलमान घिसिङको पनि उस्तै छ । उसले पनि त लोडसेडिङको तालिका निकालेको भए कसको के जान्थ्यो । आखिर नेपाली जनताले लोडसेडिङको तालिका बारे जानकारनै थिए । आखिर करोडौं नेपाली रुपैया चाइनिज र ईन्डियन इन्भर्टर देखि लिएर सडकका पेटि र गल्लीमा बेच्न राखिएका बत्तिहरुलाई बाहिरिने गर्दथ्यो । धरै कुरा के गरौ यहिले त बत्ति गयो भने सबै को मुखबाट यो शब्द निस्कन्छ — उ कुलमान गयो । अब बिजुलीको सट्टामा कुलमान भन्ने गरिसके । भन्नका लागि यदि कुलमानको नाम लिन किन सके त तिनिले । मतलब सबैलाई थाहा छ कुलमानले गरेका सह्रानिय कदम र जनताले उसलाई दिएको समर्थकबाट यो शब्द निर्मित भएको हो ।
परिस्थीति र ब्याबहारबाट पनि कतिपय कुराको थालनी हुन्छ । मैले कुलमानको निकै अन्तरबार्ता र उनका बिचारहरु पढेको, सुनेको छु । नेपाललाई लोडसेडिङ मुतm बनाउने उनका निकै तर्क र बिज्ञानका कुरा सुनेको छु । आखिर नेपालको दिनको १७ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ तालिका हटाउने प्रयासरत उहाँको बिचार र बिज्ञानलाई म नमन् गर्दछु । आज लिड वल खरिद गर्ने बिषय जसले कुलमानको आखाँमा आसु झार्न बाध्य बनाईदियो । हो उसको ठाउँमा हामी भैदिएको भए पनि आसु झर्न सक्थ्यो त्यो स्वभाबिक हो । तर उनको कदमलाई एक्कासी कुलमानलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिहाल्न मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
म कुनै प्रागिक बिज्ञ त होइन कुनै ईलेक्ट्रीकल इन्जिनियर पनि होइन तर साधरण भाषामा म यो मात्र बुझदछु कि अन्य बल भन्दा लिड वल ले बिद्युत कम खपत गरि धेरै प्रकास दिने गर्दछ । जहाँ कि प्रत्येक नेपालीहरुले यहि वलको प्रयोग गरेमा अहिले खपत भैरहेको बिद्युतमा निकै कम लाग्ने गर्दछ । यसरी नयाँ सोच र बिज्ञानले नेपालीको घर घरमा उज्यालो बनाउन खोज्ने तिनै कुलमानका आखाँबाट आसु झर्दा मलाई मात्र हैन जो कोही सच्चा देश भतm लाई नरमाईलो र लज्जित तुल्याउछ । मेरो भनाई के हो भने यदि उनीले भ्रष्टाचार तथा अनियमिता गरेको हो भने सम्बन्धित निकायले उनलाई कारबाहि गरोस हैन भने यि नेपाली जनतालाई केहि राहत दिन खोज्ने यि कुलमान घसिङको चरित्रमा दाग लगाउने र उनलाई निरुत्साहित गर्ने काम यो देश र जनताको लागि कदापी राम्रो होइन ।
भोजराज श्रेष्ठ (राज)
मोबाईल —९८५ ११९ २१९१
प्रकाशित मिति : बिहिवार, बैशाख २८, २०७४ समय - १३:२४:५६ View Count : 1351 Views
मानसिक स्वास्थ्यमा चाड पर्वको महत्व !
राज्यमन्त्री बन्दै गरेका इन्द्र बानियालाई मकवानपुरबासीको यस्तो पत्र
नयाँ संविधानविभेदकारी संविधान नेपाली राजनितिमा कालो धब्बा